China Thermochromic pigmenti maka thermochromic paint Thermochromic Ink Thermochromic Fabric Manufacture and Factory | Topwell
Themochromic pigments na-emi esịnede Micro-Capsules na-agbanwe agba agbanwe agbanwe. Mgbe a na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ gaa na ọnọdụ okpomọkụ akọwapụtara na ink na-agba site na agba na agba (ma ọ bụ site na otu agba na agba ọzọ). Agba ahụ na-alaghachi na agba mbụ dị ka pigmenti jụrụ.
Ekwesịrị ịchịkwa ọnọdụ nhazi n'okpuru 200 ℃, nke kachasị ekwesịghị ịgafe 230 ℃, oge ikpo ọkụ ma belata ihe. (Igwe dị elu, kpo oku ogologo ga-emebi ụcha agba nke pigmenti).
Thermochromic ink nwere ike ji mee ihe maka ụdị nile nke na-ajụ na-ajụ dị ka agba, ụrọ, plastik, inks, ceramik, ákwà, akwụkwọ, sịntetik film, iko, ịchọ mma na agba, ntu Polish, lipstick, wdg Ngwa maka dechapụ ink, nche dechapụ ink, Ihuenyo
ngwa nbipute, ahia, icho mma, ebumnuche mgbasa ozi, ihe eji egwuru egwu plastik na akwa textiles ma obu ihe obula n'echiche gi.
Maka plastik: A pụkwara iji pigmenti thermochromic mee ihe na nkedo nkedo plastik ma ọ bụ ngwaahịa extrusion dịka PP, PU, ​​ABS, PVC, EVA, silicone, wdg.
Maka mkpuchi: pigmenti thermochromic kwesịrị ekwesị maka ụdị ngwaahịa mkpuchi niile.
Maka inks: pigmenti thermochromic kwesịrị ekwesị maka ụdị mbipụta niile, gụnyere akwa, akwụkwọ, ihe nkiri sịntetik, iko, wdg.
* Adabara eke, ntu Polish ma ọ bụ ndị ọzọ na wuru mbọ art. - Inogide: Ọ dịghị isi, eco-enyi na enyi, ọma okpomọkụ na-eguzogide.
* Adabara ingmepụta agba agba thermochromic slime na-agbanwe agba ya na ọnọdụ okpomọkụ maka ụlọ ma ọ bụ klaasị.
* Adabara textile obibi, na ihuenyo ebi akwụkwọ, nche dechapụ ink.
Nke gara aga: Photochromic pigmenti UV ink agba mgbanwe ntụ ntụ site na ìhè anyanwụ
Osote: Uv fluorescent pigmenti maka mgbochi ụgha
UV fluorescent pigment maka mgbochi ụgha p ...
Photochromic ink UV ink ink agba po ...
Uv fluorescent pigmenti maka mgbochi ụgha p ...